Big Sport Fishing 3D v1.69 Apk Game (13 MB)
Dead on Arrival2v1.0.6 Modded Apk Game 129MB
Real Steel World Robot Boxing v2.1.27 Moded Unlimi...
Grown Ups2(358MB)
True Skate v1.11 Apk Game (24 MB)
Keys 19October 2013 +2014 Activation Code For3Mo...
Rail Rush v1.4.0 Modded Unlimited Money Tickets Ap...
Kick Ass2(2013) 1.4G
သီတင်းကျွတ် အမှီ Android Phone တွေအတွက် ဗျောက်အိုး...
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်မြို့မှ ပေးစာ
ခံရခက်တဲ့ ချိန်ကိုက်ဗုံး ( သရော်စာ )
နောက်ဆုံးရ သတင်းများ apk for android
TuneUp Utilities 2014 v14.0.1000.145 Final For Win...
Camera Fv5v1.54 Full Apk 3MB
Facebook v3.8 Build 453177 Final Apk
Magic Hour Camera v1.3.20 Apk 17MB
Skype v4.4.0.31835 Apk 16MB
Instagram v4.2.2 Apk 16MB
TubeMate2YouTube Downloader v2.0.6 build 484 Apk...
Android Tuner v0.12.4 Apk 8MB
Notebooks Pro v4.5 Apk 6MB
Switch (2013) 476MB
KMPlayer v3.7.0.113 Final For Pc (35 MB)
Scary Movie5324MB
Memory Booster (Full Version) v5.8 Apk 1MB
Windows7Manager v 4.3.3 For Win7(13MB)
Facebook APK 3.8 build 450040 For Android
Asphalt 8 Airborne APK OBB DATA 1.0.4 Modded Unloc...
ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်...
Remote Computer Manager 6.0.0 For Pc
ChrisTV OnlinePremium Edition 9.50 For Pc 5MB
Windows Repair (All in One) v2.0.0 For All Win 2MB...
Wave Control Pro v2.83 Apk 2MB
Format Factory v3.2.0 For All Win 60MB
Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon Movie ...
မိုးစက်ဝိုင်ကို ဝေဖန်မှုတွေ ပြန်သုံးသပ်ပေးရန် ဒေါ်အယ...
မိုးစက်ဝိုင်အကြောင်း တရုတ်သတင်းတွေမှာလည်း ဖော်ပြနေ...
Beranda » သတင်းများစုစည်းမှု » မိုးစက်ဝိုင်အကြောင်း တရုတ်သတင်းတွေမှာလည်း ဖော်ပြနေ
Ditulis oleh: Unknown - Sunday, October 13, 2013
Miss Universe Myanmar 2013 ဆုရှင် မိုးစက်ဝိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်သတင်းမီဒီယာတွေ ကဖော်ပြနေကြပါတယ်။
မိုးစက်ဝိုင်၊ ဓာတ်ပုံ- http://udn.com/
ဒီလို ဖော်ပြရာမှာ အမေရိကန်မှာ ပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ မိုးစက်ဝိုင် ခေါ် Yang Xinrong ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က Miss Chinese Burma 2009 ဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလို 2009 Golden Phoenix Cup ရဲ့ Miss China contest runner-up ဆုရှင်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြကြပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ဆုရှင်က အခုလာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ရုရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲမှာ
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ဒါဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က စပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စခန်းသိမ်းသွားပြီးနောက် နှစ် ၅၀ ကျော်မှ မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာ တာဖြစ်တဲ့ အကြောင်းတွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အချိုးကျ အလှဆုရှင် မိုးစက်ဝိုင်နဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်များ၊ ဓာတ်ပုံ-www.chinese-tools.com/china/sexy
( Moe Sat Y ) မိုးစက်ဝိုင်ကို အခုလိုတရုတ်သတင်းမီဒီယာတွေက ဖော်ပြမှုတွေရဲ့နောက် ဆက်တွဲမှာ Miss Universe Myanmar ရွေးချယ်မှုအပေါ် မေးခွန်းထုတ်လာကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Miss Myanmar Universe Organization ကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကတဆင့် မိုးစက်ဝိုင် အပေါ် ဝေဖန် ပြောဆိုနေမှုတွေကို ဂုဏ်သိက္ခာငဲ့ညှာတဲ့အနေနဲ့ ရပ်တန့်သင့်တယ်လို့ မေတ္တာရပ်ခံထား ပါတယ်။
“MISS UNIVERSE MYANMAR 2013 မိုးစက်ဝိုင် အား Online နှင့် Facebook စာမျက်နှာများပေါ်တွင် လူနည်း တစ်စုမှ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုနွမ်းအောင် အများပြည်သူထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် သတင်းအချက် အလက် ထုတ် လွှင့်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ အတင်းဖြန့်ဝေနေခြင်းများအားမိမိတို့၏ အမည်၊ မိမိတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ
စောင့်ထိန်းရေးသား ပြော ဆိုကြပါရန် MISS UNIVERSE MYANMAR ORGANIZATION အနေဖြင့် ရပ် တန့်ပေးပါရန် တိုက် တွန်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ရေးသားသူလူနည်းစု အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်ကို MISS UNIVERSE MYANMAR ORGANIZATION နှင့် မိုးစက်ဝိုင် ကို အားပေးကြသော မိဘပြည်သူများ က သိရှိ သော်လည်း ယင်းတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာအားငဲ့ညှာထောက်ထားသောအားဖြင့် ယခုကဲ့သို့ တိုက်တွန်း
ရေးသား လိုက် ရ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။” လို့ MISS UNIVERSE MYANMAR ORGANIZATION ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Credit By : http://blog.irrawaddy.org/2013/10/blog-post_1090.html
0 comments "မိုးစက်ဝိုင်အကြောင်း တရုတ်သတင်းတွေမှာလည်း ဖော်ပြနေ ", Baca atau Masukkan Komentar
Real Steel World Robot Boxing v2.1.27 Moded Unlimited Gold Coins Apk Game 319MB
Real Steel HD ဆိုရင် တော်တော်များများသိမှာပါ Real Steel HD ထက် Game Play ကော Graphic ပါ သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စက်ရုပ်လက်ဝှေထိုးတဲ့ဂိမ်းလေးပ...
Wondershare Dr.Fone for iOS 3.5.0.25 For All Win 40 MB
Wondershare Dr.Fone for iOS အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အပ်ဒိတ်လေးပါ iPhone , iPad & iPod ထဲက Contacts, Messages, Photos ...